Fambolen-kazo : Nanatanteraka ny adidiny ny Fiadidiana ny Repoblika -
AccueilRaharaham-pirenenaFambolen-kazo : Nanatanteraka ny adidiny ny Fiadidiana ny Repoblika
11/03/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy haingitraingitra na fisehosehoana fa adidy masina amin’ny firenena. Nanome ohatra ny mpiray tanindrazana amin’ny fikajiana ny tontolo iainana mantsy ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika tamin’ny alalan’ny fambolen-kazo omaly, teny Iavoloha.
Araka izany, nifamotoana teny Iavoloha, teo amin’ny tany ao amin’ny faritry ny Lapa-panjakana ihany ireo mpiasa sy olom-panjakana eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika notarihin’ny sekretera jeneraly, ny jeneraly Ralala Roger, izay nisolo tena ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Marihina mantsy fa namita iraka, nitsidika ireo traboina tany Maroantsetra ny filoha tamin’ny andron’ny omaly io.
Araka ny toromariky ny Filoham-pirenena hatrany ny amin’ny tokony hikajiana sy ho fiarovana ny tontolo iainana no antony goavana amin’ny fanatanterahana fambolen-kazo ka izay indrindra no nanomezan’ny teo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika modely ho an’ny rehetra.
Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Fiadidiana ny Repoblika, ny jeneraly Ralala Roger, fa ny hafatry ny filoha no tena zava-dehibe amin’ny hoe “tsy ny manatsatoka ireo zana-kazo no atao hoe fambolen-kazo fa ny fikolokoloana sy ny fanaraha-maso ireo zana-kazo novolena”.
Ankoatra izay, raha ny mikasika ny fambolen-kazo indray, hisy ny kaomisaona manokana hanara-maso ny fitombon’ireo zana-kazo nambolena ireo miaraka amin’ny fikoloana azy ireo. Marihina mantsy fa zana-kazo fihinam-boa, toa ny zavoka, voasary, pibasy, manga, no tena betsaka tamin’ireo nambolena sy safidin’ny avy eo amin’ny Fiadidiana ny Repoblika. Zana-kazo 3 000 isa kosa no indray nambolena tamin’izany. Nambaran’ny sekretera jeneralin’ny Fiadidiana ny Repoblika hatrany fa hisy isan-taona ny fambolen-kazo ataon’izy ireo.
Fankalazana ny fetin’ny Noely 2016:HITA TARATRA NY FIAINGAN’NY FANDROSOANA